Xaqiijinta Khabiirada Xawilaadda Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Badbaadisid Website Isku Diyaarin Doono Hackney; Halkan waa sida
Waxaa jira noocyo badan oo weerar ah oo ka yimaada internetka. Dad badan ayaa la kulma shaqooyinkaoo ah qandaraasyo badan oo maalin kasta ah maalintooda iyo sidoo kale inta lagu jiro shaqadooda. Khasaaradu waxay ku qaadataa waqti aad u badan oo isku dayaya inay ogaadaanhabab kala duwan oo ay isticmaali karaan si ay u fuliyaan shaqadooda - ray ban official site usa. Inta badan qaababkaas waxaa ka mid ah hawlaha sida weerarada DDOS ama xitaa goob iskalehqoraalka. Dhammaan weerarradan waxay leeyihiin ujeedo aan ujeeddo ah iyo sidoo kale dhibaatada weyn ee dhibanayaasha.
Caadi ahaan, khaniisiyeyaashu waxay bartilmaameed u noqon karaan boggaaga sababo badan. Inta badan, waxay noqon karaanxatooyada macluumaadka isticmaale sida macluumaadka kaararka deynta ama xitaa hackska guddiga maamulka. Xaaladaha kale, hacker ayaa xadaan kara qiimahamacluumaadka laga helo bogga sida macluumaadka macmiilka iyo sidoo kale xisaabaadka dhinacyada kala duwan ee shirkadda. Khasaarahaayaa sidoo kale awood u leh tartanka aan caddaalad-darrada lahayn halkaasoo khardheer uu keeni karo boggaaga ama mashiinkaaga Search Engine Optimization (SEO) ee asiyaabo kala duwan. Natiijo ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in nidaamkaaga laga ilaaliyo khawano.
Jack Miller, oo ah khabiir ka soo jeeda Sare ,waxa ay ka dhigeysaa qaar ka mid ah siyaabaha kaa ilaalin kara weerarrada dadkan:
Ka ilaalinta gelitaanka aan fasax laheyn
Mid ka mid ah waxyaabihii ugu fududaa ee uu hacker ku samayn karo boggaaga ayaa isku dayaya inuu galo sida maamulka.Natiijadu, kumbuyuutarku wuxuu isku dayi karaa in uu qiyaaso sirta kala duwan si uu u arko mid ka mid ah iyaga oo ku dhici kara jaahilnimadaada. Isticmaalka ereyada sirta ahwaa lagama maarmaan. Password-yada sida 12345 ammaan ma ahan waxayna soo bandhigi karaan bogga oo dhan boggaan hacker ah. Intaa waxaa dheer, waa inaadan isticmaalin sir ahtaas oo aad u fudud in la qiyaaso. Ereyada sida magaca ilmahaagu wuxuu noqon karaa falanqeyn buuxda qof aqoon u leh. Bedelkeeda, isku darjilayaal kala duwan oo leh nooc kala duwan.
Xuddunta Qorista Bogga (XSS)
Tani waa hack ah oo u baahan dhamaadka isticmaalaha. Khadkani wuxuu ku lug leeyahay isticmaalka qaar ka mid ahfoomamka iyo qodobada qoraalka aad isticmaashid, sida foomka rukunka. Kacbiyuutar ayaa soo jiidaya koodhka codsiga ee foomka isticmaalaha ee ku jira qoraalka. Markaagaraacid gelis, script wuxuu bilaabmayaa inuu ordayo serverkaaga. Natiijadu, kumbuyuutarku wuxuu ku guulaystaa helitaanka dhammaan xogta macaamiisha, oo ay ku jiraanmuxaadarada macaamiisha ku dhuftey mar kasta oo ay galayaan boggaaga. Si loo saxo dayacankan, waxaad u baahan tahay hab lagu canshuurayomacluumaadka foomamkaaga ka hor inta aanad ku quudin diiwaankaaga. Natiijada, qoraalku ma kari karo database-kaaga tan iyo markii horetallaabooyin meel looga dhajiyo si aan u dhicin.
Ganacsiga e-ganacsi kasta, amniga internetku waa dareenka koowaad marka uu yimaadosi aad shaqo u hesho. Waxaa jira isku day badan oo Hack ah iyo shakhsiyaadka laga yaabo in ay rabaan inay shabakadda internetka ka dhigtaan bogag badan oo badan. Badbaadadaadagoobta, iyo sidoo kale daryeelka caafimaad ee macaamiishaada, waxay si weyn ugu tiirsan yihiin shaqooyinkaaga sida maamulka.